बिहे भए’का पुरुष संग किन आकर्षित हुन्छन्, यु’वतीहरु ? जानि राखौँ – यस्ता छन् ६ कारण हरु…. – live 60media
बिहे भए’का पुरुष संग किन आकर्षित हुन्छन्, यु’वतीहरु ? जानि राखौँ – यस्ता छन् ६ कारण हरु….
हरेक महिला आफ्नो पा’र्टनर आफुले सोचे जस्तो होस् आफुलाई माया गर्ने आफुलाई बुझ्ने खाल को होस् भन्ने चाहान्छन त्यसैले युवतीहरु आफु भन्दा अलि बढी नै उमेर भएको पुरुष लाइ मन पराउने गर्दछन तर कोहि युवती भने बिहे भएको पुरुष लाइ मन पराउने गर्दछन कारण यस्तो छ हेर्नुहोस…
हाम्रो समाजमा अधिकांस जोडीको उमेर ज्यादै फरक हुन्छ । केही अपवाद छोडेर सबैजसो जोडीमा पुरुषको तुलनामा महिलाहरु कम उमेरका नैहुने गर्दछन्। खासमा पुरुषले आफू भन्दा कम उमेरकी महिला खोजेर यस्तो भएको होइन बरु महिलाहरु नै आफू भन्दा पाको उमेरको पुरुषसँग स’म्बन्ध राख्न चाहन्छन्। हालसालै गरिएको एक अध्ययनले यस्तो देखाएको छ।
हामीले कहिलेकाँही त्यस्ता घटनाहरु देख्छौँ जुन सहजै विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ । यस्तै एउटा घटना भारतको उत्तर प्रदेश प्रहरीकहाँ आइपुगेको छ । यो घटनालाई प्रहरीले कसरी समाधान गर्ला भन्ने बुझ्न मुस्किल रहेको छ । वाराणसी नजिकै चन्दौलीमा एक स्थानीय महिला प्रहरीको महिला सहायता डेस्कमा आइपुगेकी थिइन् ।
तर उनले जुन कुरा उठाईन् त्यसले त्यहाँ उपस्थित अधिकारीहरू अचम्मित परेका छन् । तर उक्त महिलालाई पछि फकाएर फिर्ता पठाइएको छ । उजुरी गर्ने महिलाले पतिमाथि लगाएको आरोपले सबैलाई चकित पारेको हो ।
उनको पतिले उनलाई मिल्दो साडी, लिपस्टिक, चुरा र श्रृंगारका वस्तुहरू ल्याउँदैनन् । त्यसकारण उनी पतिको विरूद्ध कानुनी कारबाही चाहन्थिन् । उक्त महिला चन्दौसी माझवार रेलवे स्टेशन नजिकै रहेको उपनिवेशमा बस्छिन् । महिलाले पतिको व्यवहार पनि ठीक नभएको आरोप लगाएकी थिइन् । उनले प्रहरीमा आरोप लगाइन् कि पतिले उनका आवश्यकताहरू पूरा गर्दैनन् ।
धेरै चोटि उनका आवश्यक्ताहरुलाई श्रीमानले आलटाल गर्छन । उनका श्रीमानसँग साडीसँग मिलाउन बँगुराहरू हुँदैन । जब ग्यास सिलिन्डर समाप्त हुन्छ, ग्यास ल्याउँदैनन् । बल्कि खाना पकाउन दाउरा प्रयोग गर्न दबाब दिन्छन् । महिलाको यो अनौठो गुनासो सुनेपछि त्यहाँ खटिएका महिला प्रहरीहरु पनि निराश हुनु परेको थियो ।
भनिन्छ, कि उजुरी गरेकी महिलालाई पछि प्रहरीहरूले फकाएर घर फर्काएका हुन् । उनले यति मात्र हैन आफ्ना श्रीमानले आफुलाई सन्तुष्टि दिन नसकेका कारण बाध्य भएर प्रहरी चौकी आउनु परेको बताएकी छिन् । प्रहरीले उनलाई घर पठाएर अनुशन्धान थालेको बताएको छ । श्रीमान्को केही गल्ती देखिएमा कानूनी कारबाही गर्ने एक प्रहरी अधिकारीले बताए ।
← राज्य संचालन गर्नेहरु एकरात सडकमा सुतुन र भोकै बसुन, अनि थाहा हुन्छ भोक र पिडाको वास्तविक कथा
सन्दीप बिग बास खेल्न अष्ट्रेलिया जाँदै….. →